The Voice – The Voice Journal
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ (AA) တို့ကြား တစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း တိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်ပြီး ပိုမိုဆိုးဝါးလာနိုင်သည့် အရိပ်အယောင်များလည်း ရှိနေသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းက စစ်တွေ – ဘူးသီးတောင်ပြေးဆွဲသည့် ရွှေနဒီအမြန်ရေယာဉ်တွင် လိုက်ပါလာသည့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအပါအဝင် လူ ၅၀...
အစိုးရများသည် ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီက ပြည်သူသို့ ကတိများပေးသည်။ အစိုးရဖြစ်ပြီးနောက် လွှတ်တော်အတွင်း “လုပ်ဆောင်မည်”ဟူ၍ ကတိများပေးပြန်သည်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်သည် အစိုးရ၏ကတိများနှင့်အာခံချက်များကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ မှတ်တမ်းတင်ရသော ကော်မတီကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့်တာဝနခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီဟု ခေါ်တွင်သည်။ စက်တင်ဘာလ ၁၈...
တရုတ်နိုင်ငံ ဟောင်ကောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွင် ယခုနှစ်ဇွန်လမှစ၍ ဆန္ဒပြပွဲများ အရှိ်န်မြင့်တက်လျက်ရှိသည်။ ယင်းဆန္ဒပြပွဲများကို ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုများဟု နိုင်ငံတကာမီဒီယာများက ကင်ပွန်းတပ်ကြသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ Mr. Chen Haiတို့သည် ဩဂုတ်လ ၂၂ ရက်တွင် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။...
Crime & Accident / Interviews
“အဓိကတော့ ဆန်တွေ စားသောက်စရာတွေ သွားပုိ့ချင်တယ်။ ပို့ဖို့တော်တော်ခက်နေတယ်”
ရေးမြို့နယ် ရေကြီးမှုအခြေအနေကို မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ အောင်နိုင်ဦးနှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းခြင်း မွန်ပြည်နယ်တွင် မိုးသန်းထည်စွာရွာသွန်းကာ မြို့နယ်များတွင် ရေကြီးခြင်း၊ မြေပြိုကျမှုများဖြစ်ပွားနေသည်။ ရေးမြို့နယ်တွင်လည်း ရေကြီးမှုအခြေအနေဆိုးဝါးနေပြီး မြို့ပေါ်တွင် တစ်မြို့လုံးနီးပါး ရေကြီးနေကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။ ထို့ကြောင့် ရေကြီးမှုအခြေအနေကို...
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်က လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနကို ရှောင်တခင် ဝင်ရောက်စစ်ဆေးကြောင်း သတင်းများထွက်လာပြီးနောက်တွင် ပြည်သူများ၏ စိတ်ဝင်စားမှုမှာလည်း မြင့်တက်လျက်ရှိသည်။ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်သည် နောက်ထပ်ငါးကြီးတစ်ကောင်ကို ကြော်လေပြီလော ဟူသည့် ပြည်သူများအကြား မဝံ့မရဲမေးခွန်းထုတ်မှုများလည်း ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်။ ကနဦးသတင်းများအရမူ အဂတိ လိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်သည်...
Articles / Business / lotaya / News Analysis
မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိမြို့ပြဖြစ်ထွန်းမှုအခြေအနေမှာ နိုင်ငံတကာနှင့် ဒေသတွင်းအဆင့်တွင် နိမ့်ပါးနေဆဲဖြစ်သည်။ သို့သော် နှစ်စဉ်မြို့ပြများသို့ ရွှေ့ပြောင်းအခြေချမှုများကြောင့် ကြုံတွေ့ရမည့် စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ယင်းတို့ကို ဖြေရှင်းနိုင်မည့် ရေရှည်တည်တံ့ဖွံ့ဖြိုးသောမြို့ပြများမူဝါဒရေးရာအကြံပြုချက်များ ပါဝင်သည့် အစီရင်ခံစာကို ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ဇွန်လ ၆ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။...
အကြမ်းဖက်စစ်သွေးကြွများ ပစ်မှတ်ထားနေသည်ဟု သတိပေးခံထားရသည့် မြန်မာအတွက် စိုးရိမ်မှု ထပ်တိုးစေသည့်အကြောင်းအရာ ထပ်ပေါ်လာပြန်သည်။ သီရိလင်္ကာတွင် အကြမ်းဖက်ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သူများနှင့် ဆက်စပ်သူတစ်ဦးသည် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား ဗီဇာဖြင့် ရန်ကုန်လေဆိပ်မှ ဝင်ရောက်ခဲ့သော်လည်း တစ်နှစ်ကျော်ကြာသည်အထိ ပြန်မထွက်သေးခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းကို အစိုးရက...
Auto Mobile / Interviews / lotaya
“ကြာရင် Aircon ကားဆိုတာ ပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်”
ပူပြင်းလှသည့် ယခုနှစ်နွေရာသီတွင် YBS ဘတ်စ်ကားများမှာ အဲကွန်းဖွင့်မမောင်းသဖြင့် ဝေဖန်ခံနေရသည့်အပြင် အရေးယူပေးရန်အထိ ခရီးသည်များက တောင်းဆိုလျက်ရှိသည်။ ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ Power Eleven ကုမ္ပဏီ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ ဦးသက်တင်ဝင်းနှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။ The Voice...
Interviews / lotaya / Politic
ဒေါက်တာ မင်းဇော်ဦးနှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းခြင်း
“UWSA ရဲ့ အင်အားပြတဲ့ ပွဲပေါ့။ တစ်ဖက်ကလည်း တပ်မတော်ရဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုကို တစ်စုံတစ်ရာ Message ပြန်ပေးတဲ့ သဘောပေါ့” ‘၀’ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၏ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှု နှစ် (၃၀) ပြည့်အခမ်းအနားကို ဧပြီလ ၁၇ ရက်နေ့က...